दसैंमा उपभोक्ता रुवाउँदै प्याज, भारतबाट निर्यातमा रोक, भाउ प्रतिकेजी रु. २२० सम्म पुग्न सक्ने Bizshala -
अन्तराष्ट्रिय बजारमा अनौठो दृश्य: सुनको भाउ र सेयरबजार एकैसाथ बढ्दै
कोरोना संक्रमणको घट्दो दर: थपिनेभन्दा निको हुनेको संख्या बढी
सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने सरकारको निर्णय, लामो दूरीका अझै नचल्ने
दसैंमा उपभोक्ता रुवाउँदै प्याज, भारतबाट निर्यातमा रोक, भाउ प्रतिकेजी रु. २२० सम्म पुग्न सक्ने
काठमाण्डौ । नेपालीको घरआँगनमा दसैँको चटरो परिसकेको छ । दसैँमा आवश्यक सरसामग्री किन्ने भीडा बजारमा बढिरहेको छ ।
दसैँको रमझम सुरु भए पनि यसपालि तरकारीजन्य वस्तुको भाउ अकासिँदा आमउपभोक्ता रुनु न हास्नुको स्थितिमा पुगेका छन् । विशेषगरी नेपालीको भान्सामा अत्यावश्यक सुकेको प्याज दोब्बरले बढ्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
गत भदौ १३ गते खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँमा पाइने सुकेको प्याज अहिले १३५ रुपैयाँ पुगेको छ । एक महिनाकै अवधिमा सुकेको प्याजको भाउ झनै शतप्रतिशत वृद्धि हुन पुगेको छ ।
नेपाली बजारमा सुकेको प्याजको भाउ अझै बढ्न सक्ने कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको अनुमान छ । समितिका अनुसार नेपाली बजारमा यहीँ उत्पादित सुकेको प्याज पर्याप्त छैन । यसको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतबाट आयात हुने सुकेको प्याजले धानेको छ ।
भारतको केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्रालयले भारतमा बढ्दै गएको सुकेको प्याजको मूल्य नियन्त्रणमा लिन अन्य देशमा निर्यात रोकेपछि प्याजको भाउ अझै बढ्न सक्ने पक्का भएको छ ।
चाडपर्वका बेला भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपाली उपभोक्तालाई सुकेको प्याजमा हुन सक्ने बढोत्तरीले रुवाउने पक्का भएको छ ।
सामान्य अचारदेखि सबैखाले तरकारीमा प्रयोग हुने सुकेको प्याज अब यो साताभित्रै दुई सय प्रतिशतले बढ्न सक्ने व्यापारीहरु अनुमान लगाउँछन् । यदि सुकेको प्यास २०० प्रतिशतले बढेमा यसको मूल्य प्रतिकेजी २२० रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने अनुमान लगाइन्छ । प्याजको कालोबजारी पनि सुरु भइसकेको छ ।
भारतको केन्द्रीय सरकारले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्धसँगै कारोबारीको भण्डारण सीमा पनि निर्धारण गरेको छ । भारत सरकारले देशभरका खुद्रा कारोबारीका लागि १०० क्विन्टल र थोक कारोबारीका लागि ५०० क्विन्टलसम्म सुकेको प्याज भण्डारण सीमा निर्धारण गरेको छ ।
अहिले भारतीय बजारमा अधिकतम प्रतिकेजी सुकेको प्याजको खुद्रा मूल्य ११० रुपैयाँदेखि १३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
यस वर्ष भारतका महाराष्ट्र र कनार्टकलगायतका राज्यहरुमा प्याज उत्पादनमा कमी आएपछि मूल्य आकासिएको हो । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको खडेरी र दुई महिनाअघिको अत्याधिक वर्ष र त्यसपछि आएको बाढीले पनि भारतमा प्याजखेती नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
सुकेको प्याजमात्र होइन नेपाली बजारमा हरियो प्याजको भाउ त झन्डै २०० प्रतिशतले बढेको छ । गत भदौ १३ गते प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँ रहेको हरियो प्याजको मूल्य अहिले २१५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै भान्जामा अत्यावश्यक हरियो खुर्सानीको भाउ पनि छोइनसक्नु भएको छ ।
भदौ दोस्रो सातासम्म ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा पाइने हरियो खुर्सानी अहिले १२५ रुपैयाँ पुगेको छ । ७५ रुपैयाँमै पाइने भेडे खुर्सानी १९० रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यस्तै हरियो सागको भाउ त झनै आकासिएको छ । भदौको दोस्रो साता प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँमा पाइने रायो र पालुंगोको साग झन्डै २१५ प्रतिशतले बढेर अहिले २०५ रुपैयाँ पुगेको छ ।
Onion price on top
पेट्रोल र डिजेलको मूल्य लिटरमा रु. २ ले घट्यो, कतिमा झर्यो भाउ ?
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य...
अनलाइन सपिङ गर्दा अपनाउनुस् सावधानी, नत्र हुन सक्छ ठूलो
काठमाण्डौ । प्रविधिको विकाससँगै विश्वमा अहिले अनलाइन ट्रेडिङ...
हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटीद्वारा नगद लाभांश प्रस्ताव, वार्षिक
काठमाण्डौ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट...
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्यवृद्धि, पेट्रोलको भाउ यथावत
काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन...
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर रु. २ ले बढ्यो, एलपी
काठमाण्डौ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएपछि नेपाल आयल...
'कस्मिक क्रिस्प' एक वर्षसम्म नकुहिने नयाँ प्रजातिको स्याउ, कति
काठमाण्डौ । दुई दशक लगाएर विकास गरिएको र एक वर्षसम्म फ्रिजमा राख्दा...
सुर्तीजन्य पदार्थमा कर छली गर्ने विभिन्न कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध...
नेपालमा बनेकै छैन ‘जैविक’ उत्पादनको मापदण्ड, विनापरीक्षण
- नारायण ढुङ्गाना काठमाण्डौ । बजारमा जैविक खाद्य वस्तुको नाममा...